Namoonni dhagahuu hin dandeenye shubbisuu akka danda'an beektuu - BBC News Afaan Oromoo
Namoonni dhagahuu hin dandeenye shubbisuu akka danda'an beektuu
Muuziiqaa fi sochii shubbisaa adda baasanii yaaduun rakkisaa ta'u mala. Sababiin isaas sochiin shubbisaa namoota baay'ee kan murtaa'u muuziiqaa gurraan dhagahuu irratti qofa waan ta'eefi.
Garuu namoota dhagahuu hin dandeenyeef sagaleen muuziiqaa qofaa isaatiin hiika hin qabaatu. Waan hin dhageenyeefu miirri isaaniitti uumus hin jiru. Caalaatti haala shubbisa isaanii kan murteessu rukkuttaa muuziqichaati.
Haala rukkuttaa Muuziqaa attamiin hubatu?
Gareen shubbistootaa fi tiyaatiraa miseensota dhagahuu hin dandeenyee kun, magaalaa Finfinnee naannawa Shiroo Meedaatti argama. Miseensonni garee kanaa akka jedhanitti, rukkuttaa muuziiqaa hubachuuf haalawwan lamatti fayyadamu.
Shubbisaaf shaakallii jalqabaa kan taasiisan lakkoofsa gateettii isaanitiin. Adeemsi kunis kan gateettii isaanii sochoosuun tokko, lama, sadii jechuun lakkaa'anii dha.
Kunis adeemsa warra dhagahan illeen itti fayyadaman yoo ta'u, isaaniif ka'umsa shubbisaati. Shubbisaan dhagahu hin dandeenye kan akka Qiddus, ka'umsa qofa osoo hin taanee waltajjii irratti yoo taphatan illeen mala kanatti fayyadamu.
Muuziiqaawwan rukuttaan tokko, lama, sadi ykn isaan ol isaan barbaachisu adda baasanii lakkaa'uun gateettii isaanii sochosuun shubbisu.
Gurraan dhagahuu dhabuun shubbisuu irraa isaan hin dhorkine
''Anis jalaqaba yoon eegalu televijiniin ilaaluun baay'een inaaffan ture. Kana gochuu hin danda'u jedhees baay'een gadda ture. Booda garuu maaliifan hin yaallee, yoo ta'u baate nan dhiisa jedheen namaan marii'adhe. 'Nama dhagahuu hin dandeenyeef shubbisuun waan hin yaalamnee dha'' jedhe dubbata dargaggoon televizhiinii ilaalee shubbisaan hawwatame Qiddus.
Bakka baay'eetti yaalu illeen yaadni namoota hundumaa tokko ture. Garuu osoon abdii hin kutatiin gaaffii kiyyaa itti fufuun nama waa'ee garee kanaa beeku tokko argadhe. Innis asi na fide.
Qiddus wayita garee kanatti makamu shubbisu akka danda'u ofisaa amansiisuuf yeroo baay'ee itti hin fudhanne. Osoo hin nuffiinis manaa fi bakka shaakkalliitti hojjataa ture.
''Miira muuziiqaa hubachuudhaaf meeshaan muuziiqaa lafa yoo kaa'amu rukkuttaan miila keenyatti ni dhagaahama. Muuziiqaan sunis qaama koo guutuutti akka natti dhagahamuuf sagaleen olkaafamee sirritti saaqamu qaba. Wayita sanattis rukkuttaan isaa addunyaa biraa keessa na galcha.
Booda keessa, akkan sirriitti shubbisu hubannaan ofiinan boone. Ammas hin dhaabu, sichin baay'ee hojjadha,'' jedha Qiddus.
Shamarree waggaa 19 kan taatee, Simrat akkuma garichaatti dabalamteen adeemsicha hubachuun baay'ee itti ulfaatee ture. Shubbiisaaf jaalala addaa qabaattu illeen mala isaa hubachuuf rakkachu ishee dubbatti.
''Jalqaba waan na rakkisuuf sagalee ol kaasuun irra deddeebiin shaakalaan ture. Keessattuu Amaariiffaa yoo ta'u, hubachuun na rakkisa ture,'' jetti.
Shubbisoota keessaayis baay'een isaanii muuziiqaa Tigiriffaa filatu. Sababiin isaas yeedaloo fi rukkuttaan dibbee qulqullaa'uun waan sirriitti itti beekamuufi.
Goodayyaa suuraa Shubiftoonni dhagahuu hindandeenyee muuziiqaa malees akka barbaadanitti ragadu danda'u
Waltajjii irratti gareen shubbisuuf attamiin walii galuu?
Namoonni dhagahu danda'an bakkaa bakkatti wal geeddaranii shubbisuuf yeroo baay'ee, jijjiirama yeedaloo akka mallattootti itti fayyadamu. Kanaafis dursanii irratti walii galu.
''Nuti garuu kan fayyadamnu waan agarruuni'' jedha Qiddus. Shubbisaan fuuldura jiru kanneen booda jiran hunda hogganuuf itti gaafatamummaa qabaata. Sababiin isaas, jalqaba isheen/inni erga geeddareen booda, kuun kan hordofan waan ta'eefii dha.
Kanaafuu, warra kaan irraa kan eegamu, sochii fi jijjiirraa eddoo walduraa boodaan hordoofu qofaadha. Yeroo tokko tokko ammoo bakka rukkuttaan muuziiqaa hin baay'annetti rukkuttaa lakkaa'uun waliin dubbannee shubbisa waliin hojjanna.''
Gareen Ebla bara 2008 hundeeffame kun, miseensoota isaa 14'n shubbisaa fi tiyaatiraa waltajjiiwwan adda addaarratti agarsiisee jira.
Sisaay Tasammaa, hojii gaggeessaa fi leenjiisaa garee kanaati. Torbanittis guyyoota sadiif leenjii ni kennaafi.
Garichis Ministeera Dhimma Hojjataa fi Hawaasummaatti, damee Waldaa waarra dhagahuu hin dandeenyee, Yunivarsitii Finfinneetti Barnoota fedhii Addaa fi Federeeshinii Ispoortii warra dhagahu hin dandenyeetiin deeggarsii akka taasifamuuf dubbata.
Haa ta'u malee, karoorri garee kanaa hedduunis sababii hanqina maallaqaatiin osoo hin raawwatamiin hafuu isaa dubbata.
''Nuti yaadne waan baay'ee karoorfannu iyyuu, maallaqa oggeessotaaf kanfallu hin qabnu.'' Garuu ammas abdii hin kutanne. Mana tiyaatiraa warra dhagahu hin dandeenyee fi dorggommii televijiinii qopheessuuf yaada qabu.
Jilli haala dhaabni ABO biyyatti galu mijeessu Itoophiyaa seene
Atileet Fayyisaa Leellisaaf Itoophiyaan waamicha dhiheessite
Balaan konkolaataa naannoo Amaaraa lubbuu 16 galaafate
Tarkaanfiin namootni hoomaan fudhatan maalirraa madda?
Sudaan Kibbaa hojjettoota gargaarsaaf 'daran hamtuudha' jedhamte
Dargaggeessa kuduraafi muduraa tortoree gatamuuf fala argate
Jilli Adda Bilisummaa Biyyaalessaa Ogaadeen biyya gale
Shaashamanneetti lubbuun namoota 3 darbe